Ny hazakazaka malaza sy malaza indrindra eran-tany | Soavaly Noti
Ilay soavaly dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo mpiara-dia mahatoky indrindra amin'ny olombelona nandritra ny tantarany. Tahaka izany ny zava-nisy, fa ity biby ity dia nahavita ampahany mavitrika tokoa amin'ny lafim-piainana isan-karazany amin'ny olombelona, ​​ka hatramin'ny anjara toerany lehibe na dia amin'ny fanatanjahantena aza.
Ho an'ny ankamaroan'ny mponina, ny hazakaza-tsoavaly dia lasa iray amin'ireo fialamboly lehibe indrindra. Raha ny marina, ity taranja fanatanjahantena ity dia fantatra amin'ny anarana hoe "Ny fanatanjahantena mpanjaka". Izany no antony, fa ny fifaninanana hazakazaka dia lasa iray amin'ireo fotodrafitrasa lehibe indrindra manerantany.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hampahafantarinay anao ireo racetracks izay mitana ny toerana avo indrindra amin'ny laharana. Fananganana mahavariana izay manome hazavana miavaka amin'ny hazakaza-bolo.
3 Arzantina avy any Palermo
4 Ny Zarzuela
Ity hazakazakazakazaka ity no tena manintona sy mahavariana indrindra amin'ny rehetra. Mihoatra ny fefy natao ho an'ny fankalazana ny hazakaza-tsoavaly, dia lasa tanàna tena izy. Efa hita ao Dubai, Emira Arabo Mitambatra.
Tsy nasiana vola lany tamin'ny fananganana azy. Bebe kokoa 1200 miliara dolara no fampiasam-bola takiana.
Ny lalany dia manana halava 2,4 kilometatra, ny lehibe indrindra eto an-tany. Ireo mpankafy izay maniry ny hijery ireo hazakazaka tanterahina any, dia ho afaka hanao izany avy amin'ny toerana avo lava misy azy, izay misy toerana 55.000 mahery.
Ho fanampin'izany, azonao atao ihany koa ny mijanona ao amin'ny trano fandraisam-bahiny manaitra, izay mahatratra hatrany efi-trano 290 no miorina amina quota tsy azo eritreretina. Izy io koa dia miantso, ary betsaka, ny fikasan'ny tranombakoka, ny trano fisakafoanana malaza, ny teatra sns.
Raha jerena voalohany, dia mety toa ny hazakaza-tsoavaly no tsy manandanja indrindra amin'ity hazakazaka ity.
Tokony holazaina fa ao anatiny dia tsy misy filokana hilokana, satria ny finoana silamo dia mandrara azy ireo mafy.
Ilay hazakazaka tena mpanjaka, ary tsy nilaza izany intsony. Any amin'ny tanànan'i Ascot, akaikin'ny Windsor Palace. Izy io dia mifandray akaiky amin'ny satroboninahitry ny anglisy, raha ny marina dia fananan'izy ireo izany.
Sambany nahita ny jiro tao 1711, avy amin'ny tanan'ny Mpanjakavavy Anne, ary misaotra ny fanontana voalohany an'ny Ascot Gold Cup, iray amin'ireo fifaninanana malaza indrindra hita tao anatin'ny fizaran-tany fifaninanana hazakaza-tsoavaly.
Ny toerana misy azy dia misy mponina amin'ny ankamaroan'ny olona manana ny toerana ambony eo amin'ny fiarahamonina sy ny andriana. Raha ny marina, Elizabeth II mihitsy dia mpijery mahatoky.
Arzantina avy any Palermo
Manana ny voninahitra lehibe izy amin'ny maha-hazakaza-jaza voalohany natsangana azy eo amin'ny tanànan'ny tanànan'i Buenos Aires. Tsy misy isalasalana fa izy io dia iray amin'ireo marika mampiavaka indrindra ny firenena Arzantina.
Ny fitokanana azy dia natao tamin'ny faran'ny taonjato faha-XNUMX, tamin'ny taona manokana 1876, eo anelanelan'ny Park tamin'ny 3 Febroary sy ny Alfalfares de Rosas. Sivy taona taty aoriana dia nanatri-maso ny iray amin'ireo teny nalaina tsy fahita fahita teto amin'ity tontolon'ny hazakazaka soavaly ity izy: ny loka lehibe nasionaly, izay nisy 2500 metatra ny rakotra azy ary ny vahinin'ny voninahitra dia ny filoha Julio Roca.
Raha miresaka momba ny hazakaza-tsoavaly any Espana no resahina, dia misy mpiorina mahery noho ny mazava: ny hazakazaka Ny Zarzuela. Tafahitsoka ao eizy Monte de la Zarzuela, akaikin'ny tanànan'i El Pardo any Madrid.
Ny fakana an-keriny ny taloha Hazakazaky ny Castellana Io no nahatonga an'i La Zarzuela hanomboka nanangana manodidina ny taona 1931. Ny hatsarany mampiavaka azy dia tsy voamariky ny olona. Raha ny marina dia heverina ho iray amin'ireo asa lehibe an'ny Repoblika izy io, ary tamin'ny taona 2009 dia nambarana ho fananana tombotsoan'ny kolontsaina izy io.
Tsy nijanona ny hetsika tao anatiny, afa-tsy tamin'ny vanim-potoana teo anelanelan'ny 1996 sy 2005. Anisan'ireo porofo rehetra anoratany fa ireto manaraka ireto dia miavaka: ny Grand Prix Valderas, ny Grand Prix Cimera. Beamonte Grand Prize na Villapadierna Grand Prize (heverina ho derby espaniola lehibe).
Taona maro isan-taona, ity hazakazakazakazakazakazakazakazakazakazakazakazakazaina iray amin'ny faralahy indrindra ity dia nanao dingana ambony mba hametrahana ny tenany eo an-tampony raha ny lanjany sy ny lanjan'ireo fifaninanana nataony. Amin'izao fotoana izao, ho an'ny ankamaroan'ny mpankafy dia mitovy aminy, na eo ambany avy hatrany, ny English Ascot.
Izy io dia noforonina tamin'ny 1941, ary tantanan'ny Jockey Club of San Pablo. Manana dian-tongotra efatra izy, roa ho fankalazana ireo hazakazaka ofisialy, ny iray vita amin'ny ahitra ary ny iray kosa manana lampivato fasika.
Toy ireo mpiara-dia aminy rehetra voalaza teo aloha, io hazakazakazakaza-tsoavaly io koa dia nanjary zava-drehetra tandindon'ny tanànany, São Paulo, sy ny fireneny, Brezila.
Raha fintinina, ireo no hazakazaka tena lehibe manerantany. Na izany aza, amin'ireo anarana ireo dia azontsika ampiana hafa toy ny Fifaninanana hazakazaka any Tokyo (Tokyuo, Japon) na volontany (Montevideo, Orogoay).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Soavaly noti » fitsipika » Fifaninanana soavaly » Ny hazakazaka malaza indrindra eto an-tany